IChalet des Planereuses ePraz de Fort eValais
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguVirginie
I-chalet enhle kwi-Swiss Val Ferret ePraz de Fort.
I-chalet ihlala phakathi kwe-2 kunye ne-10 abantu. Kumanqanaba ama-3, abanzi kwaye ashushu. Indawo yokutyela yangaphakathi ilungele abantu abayi-8.
Indawo yokupaka yabucala kunye nomhlaba, ithala elijonge emazantsi, umbono ongenakuthintelwa weentaba ....
Ukuhanjiswa kwamagumbi / iibhedi kumanqanaba ama-3.
Umgangatho ophantsi: Igumbi lokulala elikhulu (iibhedi ezi-2 90 * 200 kunye nebhedi eyi-100 * 170 yomntwana kuphela) + igumbi lokuhlambela eli-1 wc + ski / igumbi lebhayisekile / umatshini wokuhlamba ...
Inqanaba loku-1: Igumbi lokulala elincinci (ibhedi e-1 yesofa 140 * 190) + 1 igumbi lokuhlambela iWC + igumbi lokugcina (i-raclette / izixhobo ze-fondue ...) + kwindawo evulekileyo 2 iilounge / indawo yokutyela + ikhitshi / isitovu somthi esiqhelekileyo esinokufikelela ithala elinetafile / i-BBQ / izitulo zokuphumla.
Inqanaba lesi-2: Igumbi lokulala elikhulu / ibhalkhoni (ibhedi enkulu ephindwe kabini yokumkani kunye ne2 90 * iibhedi ezingama-200 ezahlulwe ngomkhusane) + igumbi lokulala eliphakathi (2 90 * 200 iibhedi) + 1 lokuhlambela wc.
Ekufikeni kwakho iibhedi zenziwe, ilinen kumagumbi okuhlambela kunye nomlilo omhle kwisitofu ebusika.
Umoya wentaba ye-Chalet nazo zonke izinto ezithuthuzelayo, iincwadi, imidlalo, iTV, i-wifi ...
Kwabancinci: ibhedi, isitulo esiphakamileyo, iithoyi. Umatshini wekofu, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave, itoaster ... Izinto eziyimfuneko ekhitshini: ityuwa, ipepile ... ulwelo lokuhlamba izitya, iphepha langasese .....
Ndenza konke okusemandleni am ukuba uzive usekhaya ngexesha lokuhlala kwakho eChalet.
Indawo ezolileyo neyinyani: impefumlo yomoya omtsha!
Ixesha lokufika / lokuhamba lixhomekeke kwixesha. Qhagamshelana nam.
Ukucoca intlawulo yokuhamba 200chf.
Ndihlala 150m ukusuka Planereuses chalet. Ngokubanzi, ndilapha ukuza kukwamkela kwaye sabelane ngeengcebiso zethu nawe! Xa ndingekho siye sizilungise kunye ngokufika kwakho.
Ndihlala 150m ukusuka Planereuses chalet. Ngokubanzi, ndilapha uk…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Orsières